Waxsansheeg News - Doonta laynka mashiinka dilaaca PET
Soo dejinta xariijinta mashiinka tukaarka PET
Luulyo 5-deedii, 2020, waxaan diyaarinnay shixnad konteynar kontaynar oo dhammaystiran oo ah PET broom filament oo uu dalbaday macmiilka reer Tuniisiya.
Sababo la xiriira saamaynta COVID-2019, ku dhawaad ​​dal kasta oo adduunka ah wuxuu hirgaliyay quful xaddidan oo heerar kala duwan ah si loo xakameeyo faafitaanka COVID-2019. Laakiin sababta oo ah gudbinta-aadanaha-ee-aadanaha ee COVID-2019, gudbinta ayaa ah mid dhakhso ah, gaar ahaan waddamada isku-xidhan ama aan raacin taxadarka sayniska. Bilowgii Bishii Luulyo, tirada dadka laga helay COVID-2019 adduunka oo dhan waxay gaartay 11,000,000, oo ah koror la yaab leh.
Si kastaba ha noqotee, alaabadayadu waxay heleen su'aalo badan oo ka yimid macaamiisha shisheeyaha ah, waxaana amarkii la xaqiijiyey inuu aad ufiican yahay. Khadkii waxsoosaarka oo dhameystiran ee PET broom oo uu dalbaday macmiil reer Tunis ah bilowgii sanadkan ayaa la dhammeystirey isla markaana waqtigiisa la keenay.
Khadkan waxsoosaarka ayaa haysta 100% PET alaabada dib loo warshadeeyo, laga bilaabo walxaha ceyriinka ah ilaa dabaysha, howlgalka si otomaatig ah ayuu u socdaa. Sababta oo ah sheyga ceyri waa 100% sheyga dib loo warshadeeyo, qiimaha waxsoosaarka ayaa hooseeya, macaamilku wuxuu ku iibiyaa badeecada shinbiraha ee suuqa waxaana macaashku aad u badan yahay. Xarkaha xariiqda waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu sameeyo noocyo kala duwan oo burush ah iyo irbado geed kirismaska, kuwaas oo leh adeegsi ballaaran. Waxaan bixinaa adeegga hal-joog iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, laga bilaabo qaabeynta khadka mashiinka waxsoosaarka, dhoofinta, rakibaadda iyo u ku guuleysiga hawsha.
Alaabooyinkeenna, wax dhib ah kama soo gaarin xiriirkii hore ee shaqaalaha iibka, xaqiijinta amarrada, soo-saarista dambe iyo keenista qalabka, macaamiisha ayaa aad ugu qanacsan. Waxaan rajeyneynaa in macaamiisha ay heli karaan qalabka sida ugu dhaqsaha badan, u galiya wax soo saar oo ay macaash wanaagsan helaan. Tani si fudud uma imaanin saameynta cudurka coronavirus-ka adduunka ku yeeshay hoos-u-dhaca suuqa.